मैले गरेजस्तो अनुभूति महिलाहरूले पुरुषलाई देख्दा हुन्छ कि हुँदैन - साप्ताहिक
मैले गरेजस्तो अनुभूति महिलाहरूले पुरुषलाई देख्दा हुन्छ कि हुँदैन
वैशाख ६, २०७२
म ४२ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । मलाई १५-१६ वर्षदेखि नै आकर्षक महिलाको तस्बिर वा उनीहरूले छोटा पहिरन लगाएको हेर्ने इच्छा हुन्थ्यो र साथीहरूलाई पनि यस्तै हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्थे साथीहरू भन्थे । यो उमेरमा सबैलाई यस्तै हुन्छ । मलाई पछिसम्म पनि महिलाहरूलाई पौडी खेल्दा लगाउने पहिरनमा हेर्न मन लाग्थ्यो र त्यसैमा यौन उत्तेजना महसुस गर्थे । यो कुरा विवाहपछि हट्छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर हटेन । मैले गरेजस्तो अनुभूति महिलाहरूले पुरुषलाई देख्दा हुन्छ कि हँुदैन भन्ने कुरा पनि जान्ने मन छ ।
पुरुषले महिलालाई देख्दा उत्तेजना हुने कुरालाई लिएर धेरै लेख तथा पुस्तकहरूमा चर्चा भैसकेको छ । ती लेखहरूमा महिलाको दाँजोमा पुरुषहरू नै बढी यौन उत्तेजित हुन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । पुरुषहरूमा बढी यौन उत्तेजना हुनुको पछाडि यौन उत्प्रेरणा, लैङ्गकि भूमिकाको अपेक्षा एवं यौनसम्बन्धी अवधारणाको प्रभाव हुन सक्छ । टप टेन रिभ्यु डटकममा ४० करोड वयस्कले पोर्नोग्राफी वेबसाइट हेरेको उल्लेख छ, जसमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष तथा २८ प्रतिशत महिला रहेको बताइएको छ । विभिन्न प्रयोगात्मक अध्ययनले पनि महिलाभन्दा पुरुषमा विपरीत लिंगीलाई देखेर हुने यौन उत्तेजनाको मात्रा बढी हुने भनिए पनि महिला र पुरुषबीचको यौन भिन्नताका सम्बन्धमा किन त्यस्तो भएको हो भन्ने यथार्थ कुरा अझै अनुसन्धानकै विषय मानिन्छ ।
यस्ता अनुसन्धान गर्दा महिला र पुरुष दुवैलाई एकै प्रकारको यौन उत्तेजना हुने दृश्य देखाइएको थियो र दुवैमध्ये कसमा बढी यौन उत्तेजना हुन्छ भन्ने कुरा मापन गर्ने यन्त्र जडान गरिएको थियो । यन्त्रको प्रयोगमार्फत उत्तेजना हुँदा यौनाङ्गमा रगतको प्रवाह, मुटुको गति, रक्तचाप, यौनाङ्गको प्रतिक्रिया कति हुन्छ भन्ने कुरा समेत मापन गरिएको थियो । यसरी गरिएको अनुसन्धानले दुवै जनामा एकै किसिमले यौन उत्तेजना भएको र त्यसको मात्रा बराबर भएको पाइयो र त्यही अनुसन्धानले महिला र पुरुष दुवैमा देखेर हुने यौन उत्तेजना र दृष्टि क्षमता बराबर हुने कुराको पुष्टि गर्‍यो ।
धेरैजसो संस्कृति अनि समाजमा महिलाले आफ्नो यौन इच्छाका सम्बन्धमा गर्ने अभिव्यक्तिलाई पापका रूपमा लिइन्छ भने कतिपय समाजमा त्यसलाई स्वीकार गरिँदैन । कतिपय समाजले महिलाहरूको यौन इच्छालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । त्यसैले धेरैजसो संस्कृतिमा महिलाले सजिलैसँग आफ्नो यौन इच्छा व्यक्त गर्दैनन् । त्यसैले पनि कतिपय लेख वा पुस्तकमा महिलामा पुरुषलाई देखेर हुने यौन उत्तेजनाका सम्बन्धमा ठोस रूपमा उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।
अब फर्कौं तपाईको प्रश्नमा, तपाइर्ंको भनाइअनुसार तपाइर्ंको मनमा विभिन्न दुविधा भएको महसुस भैरहेको हो कि जस्तो बुझिन्छ । यदि त्यसो हो भने तपाईंमा उब्जिएको दुविधा मनोरोग हुन पुग्छ । कालान्तरमा महिलालाई देखेर हुने यौन उत्तेजनाभन्दा आफूमा रहेको दुविधाले दैनिक जीवनलाई नै असर गर्न थाल्छ । श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा पनि असर देखा पर्न सक्छ । तपाईंको कुराअनुसार अहिलेसम्म तपाईंको श्रीमतीसँगको सम्बन्ध राम्रो छ, त्यसैले तपाइर्ंले हाल महसुस गर्नुभएको दुविधा अनि महिलाप्रतिको अनुभूतिको अनुभव श्रीमतिसँग साट्न सक्नुहुन्छ ।
पौडी खेल्दा लगाइने पहिरनमा कुनै महिलालाई देखेर तपाईंलाई यौन उत्तेजना मात्र हुने हो कि उनीहरूसँग यौनसम्पर्क राख्ने चाहना पनि हुन्छ भन्ने कुरामा पनि प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । यदि त्यस्ती महिलासँग यौनसम्पर्क गर्ने इच्छा पनि हुन्छ भने तपाईं कुनै पनि बेला अप्ठयारोमा पर्न सक्नुहुन्छ र कानुनी झमेला समेत बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित :वैशाख ६, २०७२
उमेर ढल्कँदै जादा यौनइच्छा पनि कम हुन्छ
आवश्यकताभन्दा बढी चासो दिनु हुँदैन
मेरो च्वाइस परफ्युम नै हुन्छ
श्रीमान्लाई निकै आनन्द हुन्छ
श्रोताहरूको मनमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ
७० दिनमा अमेरिकामा मैले जे देखें
धेरै पुरुषसँगको सम्पर्कले यौनरोग हुन्छ ? मंसिर १६, २०७३
यौन परिकल्पना के हो ? भाद्र १, २०७३
यौनसम्पर्कको बेला झगडा हुन्छ वैशाख १७, २०७३
हामीबीचको यो समस्या कसरी सुल्झाउन सकिन्छ ? जेष्ठ २२, २०७२